TTSweet: ခလေးတို့အကြိုက် Popcorn Chicken ...
ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ ရှယ်ပေးမယ်။ ရယ်စရာလေးတွေရှိရင် လာပြောပြမယ်။
ခလေးတို့အကြိုက် Popcorn Chicken ...
အန်တီဆွိတို့ စင်္ကာပူမှာနေတုံးက အိမ်နားက ဟော်ကာစင်တာမှာ ကြက်ကြော်တို့၊ chicken chop တို့၊ Lemon chicken၊ ကြက်တောင်ပံကြော် အစရှိသဖြင့် ရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှိတယ်။ အဲဒီဆိုင်က ထူးထူးခြားခြား Chicken ပေါက်ပေါက်တွေလဲ ရောင်းသဗျ။ ဂျူဂျူလေးက ချစ်ကန်းပေါက်ပေါက်ကြိုက်တော့ ခဏခဏ ၀ယ်ကျွေးရသပေါ့။ ညနေ သူကျောင်းက ပြန်ပြီဆို အဲ့ဆိုင်လေးမှာ လူကျနေတော့ စောင့်စောင့်ဝယ်ရတယ်။ ၂ကျပ်ဖိုး- ၃ကျပ်ဖိုး သွားရေစာအနေနဲ့ သွားသွားဝယ်တာပါ။ ၂ကျပ်ဖိုးဆို တစ်ခါသုံး ဖော့ရေခွက်လေးနဲ့ တစ်ဗူး အပြည့်ရတယ်။ နောက်လဲကျရော အဲ့ဆိုင်က ပိတ်သွားရောဗျာ။ မရောင်းရလို့လားမမေးနဲ့။ အရမ်းရောင်းရရဲ့သားနဲ့ ပိတ်လိုက်တာ။ အဲဒီဆိုင်က အဲလိုပဲ၊ ဘယ်တော့မှ လူမမြဲဘူး။ အလွန်ဆုံးခံ ၆လပဲ။ ထင်တာကတော့ ဆိုင်က လူလာမှ ပူပူနွေးနွေးကြော်ပေးရတာဆိုတော့ ပင်ပမ်းပါလိမ့်မယ်။ ဆီပူ၊ မီးပူတွေနဲ့ တစ်နေကုန် ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ တကုန်းကုန်းလုပ်ရတော့ ဒဏ်မခံနိူင်ဘူးနဲ့တူပါရဲ့။ ငွေဘယ်လောက်ရရ တစ်ခါတရံမှာ အရမ်းပင်ပမ်းလာရင်လဲ လူတွေက မခံနိူင်ကြပေဘူး။ နောက်ရောက်လာတဲ့လူကလဲ တရုတ်လင်မယား၂ယောက်။ သူတို့လဲ ၄-၅လ တောင်မခံဘူး။ ပြေးကြပြန်ရော။ နောက်အဲ့ဆိုင်ကို ငှါးမဲ့သူမရှိတော့ ဒီတိုင်းပိတ်ထားတာ အန်တီဆွိတို့ ဒီပြောင်းလာတဲ့ထိပဲ။ အဲဒီတုံးက ဂျူဂျူလေးလဲ ချစ်ကန်းပေါက်ပေါက် စားချင်ပြီဆို KFC မှာပဲ သွားသွားစားရတော့တယ်။
KFC ဆိုလို့ သတိရလို့ပြောဦးမယ်။ စင်္ကာပူမှာနေတုံးက အိမ်မှာငှါးနေတဲ့ ညီအစ်ကို၂ယောက်က KFC သိပ်ကြိုက်ကြတာ။ လူပျိုကြီးတွေ၊ ၂ယောက်လုံး ၃၅ အထက်တွေနော်။ အငယ်ကောင်လေးက ခုတော့ အိမ်ထောင်ကျသွားပါပြီ။ သူတို့ညီအစ်ကို အမြဲတမ်း စနေ (သို့) တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်တွေဆို ရှိုးတွေ ၊ စမိုးတွေနဲ့ ဂျူရောင်းပွှိုင့်ကို သွားဖို့ ပြင်ကြပြီ။ ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ KFC သွားစားဖို့တဲ့ဗျား။ ဒီအရွယ်ကြီးတွေနဲ့ မကြီးမငယ် KFC အလုပ်တစ်ခုလုပ် သွားစားကြတယ်ဆို ကိုယ်တွေမှာ ရယ်ချင်နေရော။ အကြီးကောင်လေးက ရန်အောင်တို့ ငယ်ငယ်ကလိုရုပ်မျိုး ချောချောလေးခင်ဗျ။ အလှအပ အမွှေးအကြိုင်ကလဲ အရမ်းကြိုက်။ သူ ရေမွှေးတွေကို ထောင်းလမောင်းထအောင်ဆွတ်လာပြီး အခန်းထဲကထွက်လာပြီဆို အန်တီဆွိက စပြီ။ ဟဲ့ နိူင်ကြီးတို့ညီအစ်ကို KFC သွားစားမှာကို ဒီလောက်ရှိုးစမိုးတွေ လုပ်ကြလားပေါ့။ အံမယ် သူတို့က သူတို့ဟာသူတို့ စားရုံမက တစ်ခါတရံလဲ ဂျူဂျူတို့ တူအရီးကို ခေါ်သွားကြသေးသဗျာ။ ဂျူဂျူတို့ အဒေါ်လဲ KFC ကြိုက်တော့ သူတို့အချင်းချင်းတော့ အကိုက်ပဲ။ အဲဒီမှာ ဂျူဂျူလဲ သူကြိုက်တဲ့ ချစ်ကန်းပေါက်ပေါက် ၀ယ်စားတယ်ပေါ့။
အဲဒါတင်မက ရယ်ရတာက ဒီဖက်ပြောင်းခါနီးတစ်ရက်ကျ အစ်မတို့ကို နှုတ်ဆက်ပွဲ KFC မှာ ကျွေးချင်လို့တဲ့ဆို ပေါက်ချလာသေးတယ်။ အဲဒီအချိန် အငယ်ကောင်လေးက အိမ်ထောင်ကျလို့ သူတို့တခြားအိမ်ပြောင်းသွားကြပါပြီ။ အဓိကက သူတို့က ဂျူဂျူလေးကို အရမ်းချစ်တော့ သူ့တို့ ညီမကို နှုတ်ဆက်ချင်တာပါ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ KFC ကြိုက်တဲ့ ညီအစ်ကိုနဲ့ chicken ပေါက်ပေါက်ကြိုက်တဲ့ ဂျူဂျူတို့ရဲ့ နှုတ်ဆက်ပွဲကို KFC မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။
ဒီရောက်တော့ ကိုယ်တိုင် ဂျူဂျူလေး နေထိုင်စားသောက်ရေး စီစဉ်နေရတာဆိုတော့ သူကြိုက်တတ်တာလေးတွေ မှတ်ထားပြီး လုပ်ကျွေးရတယ်။ ကြုံလို့ပြောရရင် ဒီက KFC မှာတော့ ဂျူဂျူစားလေ့ရှိတာက All Star box ဆိုတဲ့ package ပဲ။ အထဲမှာ Chicken popcorn ဗူးလေးတစ်ဗူး၊ ကြက်တောင်ပံ တစ်ချောင်း၊ ကြက်ပေါင် အသေးတစ်ချောင်း၊ ရင်ပုံတစ်ခု၊ နောက် ပေါင်မုန့် အသေးတစ်လုံး၊ mash potato, gravy, ပက်စီ အဲဒီလို အများကြီးပါတယ်။ ဂျူဂျူလေးက တစ်ယောက်တည်း မကုန်တော့ သူ့အမေကြီးကပဲ ဘေးက ကပ်တုတ်ရတာပေါ့ဂျာ။ အမှန်ကတော့ ခလေးစားတာတွေ ဘယ်စားချင်မှာတုံး။ အပြင်သွားလို့ စားကြပြီဆို သူ့အမေကြီးမှာ သူကြိုက်တာ ဘယ်တော့မှ မစားရရှာပါဘူး။ သမီးမကုန်လို့ကျန်တာရယ် ယောက်ျားဆီက နဲနဲကပ်မြည်းတာရယ်နဲ့ ဗိုက်ပြည့်တာချည်းပါပဲ။ ဒီက ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာ ကိုယ်တွေ ၂ယောက်စာလောက်ရှိတာကိုး။ ကျန်နေရင် နှမြောစရာမဟုတ်လား။
ကဲ ချိကန်းပေါက်ပေါက် အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ ဘယ့်နှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သနားအောင် ရေးမိနေပါလိမ့်။ ကဲကဲ အတိုချုပ်ရရင် အဲသလို KFC တို့ MC Donald တို့မှာသာ စားရတဲ့ chicken popcorn ကို သမီး အိမ်မှာ အလွယ်တကူ စားရအောင် စမ်းလုပ်ရင်းနဲ့ အောင်မြင်သွားလို့ သမီးအတွက် အမြဲလုပ်ကျွေးခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အများအားဖြင့် သမီးကျောင်းကပြန်လာ ဆာလာပြီဆို အဲဒါလေးနဲ့ အာလူးချောင်း လေး (French fry) ကြော်ပေးထားလိုက်တာ။ အမြဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဆီကြော်တွေဆိုတော့ ခလေးတွေအတွက် သိပ်တော့မကောင်းဘူး။
Chicken popcorn လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက (ခလေး ၂ယောက်စာခန့်)
ကြက်သားရင်ပုံသား ၂၀၀ ဂရမ်ခန့်
ကြက်သားမှုန့် 1/2 tea spoon
ဆား 1/4 tea spoon
သကြား 1/2 tea spoon
ငရုပ်ကောင်း 1/3 tea spoon (အစေ့ လှော်ထားတာကို လက်နဲ့ လှည့်ကြိတ်တာလေး ထည့်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တော့ အနံ့တော်တော်မွှေးပါတယ်။ )
နွားနို့ ( full cream) 30 ml
အကြော်မှုန့် စားပွဲဇွန်း မောက်မောက် တစ်ဇွန်း
bread crumbs (သို့) Corn crumbs
ဆီ (အိမ်မှာတော့ မြေပဲဆီရယ်၊ ဟင်းရွက်ဆီရယ် တစ်ဝက်စီရောကြော်ပါတယ်၊ ခလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ကြော်ပြီးသားဆီကို ၂ခါ လောက်ပဲ ထပ်သုံးပါတယ်)
ကြက်သားကို စင်တီမီတာ တစ်ဝက်လောက် ခပ်သေးသေးလေးတွေ လှီးပါတယ်။ chop လုပ်တယ်ပေါ့။
ဆား၊ သကြား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့်တို့နဲ့ နယ်ပါတယ်။
၅မိနစ်ခန့်ခဏနှပ်ထားပြီးမှ နွားနို့ထည့်ပြီး အသာမွှေပေးပါတယ်။
ကြော်ခါနီးမှ အကြော်မှုန့်ကို ထည့်ပြီး ဇွန်းလေးနဲ့ နယ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကြက်သားနယ်ထားတာက နွားနိူ့များလွန်းပြီး သိပ်ကျဲနေရင်လဲ မကောင်း၊ အမှုန့်များပြီး သိပ်ခြောက်နေရင်လဲ ကြော်တဲ့အခါ မာဆတ်ဆတ်နဲ့ မကောင်းပါ။ မပျစ်မကျဲလေးဖြစ်ပါစေ။ (အန်တီဆွိပြောတဲ့ အချိုးက ဟန်မကျရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြင်နိုင်အောင်ပါ။)
နောက် ပန်းကန်တစ်လုံးထဲ bread crump တွေကို ကြက်သားလုံးလေးတွေ ထည့်လူးရအာင် ခင်းပါတယ်။
မီးဖိုပေါ်မှာ အိုးဇောက်နက်နက်ထဲ ဆီများများထည့်ပါတယ်။ ဆီကို ကြက်သားလုံးလေး တွေ အားလုံး တစ်ခါထဲ၊ တစ်ပြိုင်တည်း ကြော်လို့ရလောက်အောင် ထည့်ပါတယ်။ မီးအေးအေးဖွင့်ထားပြီး ကြက်သား နယ်ထားတာ အနည်းငယ်စီကို bread crump နဲ့ လုံးပြီး ဆီထဲကို အသာထည့်ပါတယ်။ အရွယ်က ထန်းညက်လုံးခန့် သေးပါတယ်။ (ဆီကျက်မှ ထည့်ရင် လုံးရင်းထည့်ရင်းဆိုတော့ ကြက်သားက ကိုယ်မအားလို့ မဆယ်နိူင်ခင်မှာ တူးသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဆီအေး၊ မီးအေးမှာထဲက စထည့်ပါတယ်။ ဒါဆို အားလုံး အကျက်ညီပါတယ်။ )
(အန်တီဆွိ မီးကို ယောင်ပြီး high ထားမိလို့ စောစောထည့်မိတဲ့ဟာတွေ နဲနဲတူးသွားတယ်ဂျ။)
ကြက်သားအလုံးလေးတွေ အိုးထဲ အကုန်ရောက်မှ မီးကို mediumလောက်အထိ မြှင့်လိုက်ပါ။
အကျက်ညီအောင် အပေါ်အောက် အသာမွှေပေးပြီး ရွှေဝါရောင်သန်းလာရင် စကာနဲ့ စစ်ပြီးဆယ်လို့ရပါပြီ။
စားချင်စဖွယ် ချစ်ကန်းပေါက်ပေါက်တွေပါ ခင်ဗျ။ ကြက်သားက အစကတည်းက ချိုပြီးသားဆိုတော့ ငရုပ်ကောင်းနံ့လေးသင်းပြီး ချိုနေတဲ့ ခလေးတို့ အကြိုက် Chicken popcorn တွေပါ။ ဂျူဂျူကတော့ မေမေကြော်တာ ဆိုင်ကထက်တောင် ပိုကောင်းတယ်လို့ ခဏခဏ ပြောပါတယ်။ (ဟီး ... ကြော်ငြာ ၀င်တာ တော်တော်များသွားပြီ ... တော်မှ .. တော်မှ ...း)))
french fry တွေ ပါ ကြော်လိုက်ပြီး ခလေးတို့ အကြိုက် မွန်းလိုက်ကို coke လေးနဲ့ သုံးဆောင်နိူင်ကြပါပြီ။
Posted by T T Sweet at 9:37 AM
Labels: (၇ ၀၀) Western food (ခလေးတို့အကြိုက်), (၇- ၄) Popcorn Chicken
Anonymous October 7, 2012 at 10:49 AM
ko9October 7, 2012 at 10:58 AM
ဂျူဂျူကတော့ မေမေကြော်တာ ဆိုင်ကထက်တောင် ပိုကောင်းတယ်လို့ ခဏခဏ ပြောပါတယ်
Anonymous October 7, 2012 at 1:46 PM
အိမ်မှာချက်တော့ဈေးလည်းသက်သာ များများလည်းစားရ သန့်လည်းသန့်
Anonymous October 7, 2012 at 3:43 PM
ကြိုက်တယ်ဆွိရေခလေးတွေကတော့kfc ဆိုအရမ်းကြိုက် သီတာ
Touch Me Not October 7, 2012 at 5:54 PM
ဒီကလည်း ချစ်ကန်းပေါက်ပေါက် ကြိုက်တယ်
တခါမှ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ မစဉ်းစားမိဘူး၊
သမီးလေး ဂျူဂျူ အရမ်းကံကောင်းတယ်။
Evy October 7, 2012 at 7:18 PM
Anonymous October 7, 2012 at 8:04 PM
ကျနော်လည်း ခနခနစားဖြစ်တယ်။ တီဆွိကြော်ထားတာလေးတွေလည်း စားချင်စရာ။
မမိုး October 8, 2012 at 2:56 AM
တီဆွိရေ.. အဲ့လို သူကြိုက်တတ်တဲ့ ဆီကြော်တွေ ကျွေးတဲ့အခါ
မုံလာဥနီလို ဆလပ်ရွက်လို အသီးအနှံ လေး နဲနဲချင်း ထဲ့ကျွေးကြည့်ပါလား။
ဒါပေမဲ့ နဲနဲလေးကစတော့ မသိသာဘူးလေ...နောက်အကျင့်ပါရင် ကြိုက်သွားတတ်တယ်။
ဒီအမေ ဒီသမီးကို အင်မတန်မှ သဘောကျတယ်ကွယ်..
NSA October 8, 2012 at 7:39 PM
စားချင်လိုက်တာ... သမီးလေးက မပြောတတ်သေးဘူး.. သူ့အမေက ပုံကြည့်ပြီး စားချင်နေပြီ :P
susu October 9, 2012 at 3:16 AM
မြသွေးနီ October 11, 2012 at 4:30 PM
သားပြည့်လည်း အာလူးချောင်းကြော်ကြိုက်လို့ မကြာခဏ ကြော်ကျွေးရတယ်..အစ်မဆွိ
Chicken popcornလေးလုပ်ရလွယ်သားပဲနော်။ သားပြည့်ကို ကြော်ကျွေးကြည့်ဦးမယ်။
sophia February 12, 2014 at 6:00 PM
T T Sweet
မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ်မှာရေးတာ ကြာပါပြီ။ ပို့စ်တွေ များလာတော့ စုစုည်းစည်းလေးဖြစ်အောင် ဘလော့လေးလုပ်ထားတာပါ။ ကိုယ်တွေ့ဟာသလေးတွေနဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ ရေးရတာ ၀ါသနာပါတယ်။ ဘလောဂါ သူငယ်ချင်းတွေလောက် စာရေးသိပ်မကောင်းတော့ နဲနဲအားငယ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကလည်း မရေးရ မနေနိူင်ပေါင်ဆိုတော့လဲ ......................
နောက်ဆုံးပို့စ်က စဖတ်ချင်ရင် ...
ဂျူဂျူနှင့် ပင့်ခ်ကာလာ ဘောလုံးပျောက်မှု အမှုတွဲ (၁)
ဂျေမီကိုမောင်ခြိမ့်၏ သရက်သီးခွဲနည်း ...
ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ ချက်နည်း နိဿရည်း ...
အန်တီဆွိ ဆားချက်ခြင်း ..
Japanese Golden Curry ...
ကွမ်း၊ဆေးလိပ်နှင့် သင့်ကျန်းမာရေး ..
Title လေးတွေ အတိုင်းဖတ်ချင်ရင် ...
(၁ ၀၀) မြန်မာ အစားအသောက်များ *** (27)
(၁ ၀၀) မွနျမာ အစားအသောကျမြား *** (3)
(၁- ၁) ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ ... (1)
(၁- ၂) ထမင်းသုပ် (1)
(၁- ၃) မန္တလေးမုန့်တီ (1)
(၁- ၄) ပဲကြော် (1)
(၁- ၅) မုန့်ဟင်းခါး (2)
(၁- ၆) အုန်းနိူ့ခေါက်ဆွဲ (1)
(၁- ၇) ၀က်သားတုတ်ထိုး၊ ကြာဆံကြော် (1)
(၁- ၈) ဗယာကြော် (1)
(၁- ၉) အုန်းထမင်း (1)
(၁-၁၀) ငါးထမင်းချဉ် (1)
(၁-၁၁) ကြက်သားပလာတာ (1)
(၁-၁၂) ကြေးအိုးဆီချက် ၊ ကြေးအိုး (1)
(၁-၁၃) ကော်ပြန့်ကြော် (1)
(၁-၁၄) ကော်ပြန့်ကြော် ကန်ဇွန်းရွက်သုတ် (1)
(၁-၁၅) စမူစာကြော် (1)
(၁-၁၆) ကုလား စမူစာသုပ် (1)
(၁-၁၇) တို့ဟူး ကျိုနည်း (1)
(၁-၁၈) တို့ဟူးသုပ် (1)
(၁-၁၉) တို့ဟူးကြော် (1)
(၁-၂၀) ရှမ်းဟင်းထုတ် (1)
(၁-၂၁) ရခိုင်မုန့်တီ (အာပူ၊လျှာပူ) (1)
(၁-၂၂) ငါးဆုတ်လုံး မုန့်တီ (1)
(၁-၂၃) မြီးရှည် (1)
(၁-၂၄) ဒန်ပေါက် (1)
(၁-၂၅) ရှမ်းခေါက်ဆွဲ (1)
(၁-၂၆) ၀က်စတူး (1)
(၁-၂၇) ရန်ကုန်စတိုင် ခေါက်ဆွဲကြော် (1)
(၁-၂၈) ကွကျကခငျြခကျြ (1)
(၁-၂၉) ရှမျးမုံညငျးခဉျြ (1)
(၁-၃၀) မွနျမာ အကွိုကျ မဆလာ (1)
(၂ ၀၀) မြန်မာ မုန့်သရေစာများ*** (17)
(၂- ၁) ဆီထမင်း၊ မန္တလေးပဲကြော် (1)
(၂- ၂) မုန့်ဖက်ထုပ် (1)
(၂- ၃ ) ကောက်ညှင်းပေါင်း နဲ့ ပဲပြုတ် (1)
(၂- ၄) မုန့်ကြာစေ့ (1)
(၂- ၅) ငှက်ပျောသီးပေါင်း (1)
(၂- ၆) ထမနဲ (1)
(၂- ၇) မုန့်လုံးရေပေါ် (2)
(၂- ၈) အုန်းနို့ကျောက်ကျော (1)
(၂- ၉) မုန့်ဦးနှောက် (1)
(၂-၁၀) ကြက်ဥ ပူတင်း (1)
(၂-၁၁) အုန်းနိူ့ သာကူပြင် (1)
(၂-၁၂) ဖာလူဒါ ပြုလုပ်ခြင်း (1)
(၂-၁၃) မုန့်လင်မယား (1)
(၂-၁၄ မုန့်ပြားသလက်) (1)
(၃ ၀၀) မြန်မာ ဟင်းများ (8)
(၃- ၁) ကြက်ဟင်းခါးသီးနှပ် (1)
(၃- ၂) ငါးခြောက် အုန်းနို့နှပ် (1)
(၃- ၄) ငါးဥဟင်း (1)
(၃- ၅) မှိုကန်ဇွန်း အစပ်ကြော် (1)
(၃- ၆) နွားနိူ့ခဲပြုလုပ်နည်းနှင့် နွားနိူ့ခဲချက် (1)
(၃- ၇) အင်ဥကြော် (1)
(၃- ၈) ကြက်ကာလသမီးချက် (1)
(၃- ၉) ဖလန်တောင်ဝှေးကြော် (1)
(၄ ၀၀) စင်္ကာပူမှ အစားအသောက်များ (15)
(၄- ၁) Kway Chap (1)
(၄- ၂) မြေအိုး ကြက်တောင်ပံပေါင်း (1)
(၄- ၃) ကန်စွန်းရွက် အစပ်ကြော် (1)
(၄- ၄) ကန်ဇွန်းဟော့ပလိပ် (1)
(၄- ၅) Chicken ဆာတေး (1)
(၄- ၆) စင်္ကာပူစတိုင် ငါးခေါင်းဟင်း (1)
(၄- ၇) Hokkien Prawn Mee (1)
(၄- ၈) ၀က်သား ကောက်ညှင်းပေါင်း) (1)
(၄- ၉) Mee Pok (1)
(၄-၁၀) ကြက်ဆီ ထမင်း (1)
(၄-၁၁) Steam Fish Recipe (1)
(၄-၁၂) Singapore style prawn mee soup (1)
(၄-၁၃) ကျဲပန်တို့ဟူး (1)
(၄-၁၄) Fried Carrot Cake (1)
(၄-၁၅) စင်ျကာပူစတိုငျ Fried fish soup (1)
(၅ ၀၀) တရုတ် အစားအသောက်များ (12)
(၅- ၁) Ginger Chicken (1)
(၅- ၂) ၀က်ကုန်းဘောင် (1)
(၅- ၃) ၀က်သားလုံး ချိုချဉ် (1)
(၅- ၄) ၀က်ရိုး ကြာစွယ်ဟင်းချို (1)
(၅- ၅) ၀က်ရိုး ကြမ်မဆိုင် (1)
(၅- ၆) ၀က်ချဉ်စပ် (1)
(၅- ၇) Ma Po Tofu (1)
(၅- ၈) ကြက်သား ငရုပ်အချိုကြော် (1)
(၅- ၉) black bean sauce- ရွှေပဲသီးကြော် (1)
(၅-၁၀) ၀က်နံရိုး အကြွတ်ကြော် (1)
(၅-၁၁) တရုတျ စတိုငျ ဝကျစတူး (1)
(၅-၁၂) Dan Dan Noodles (1)
(၆ ၀၀) ယိုးဒယား အစားအသောက်များ (4)
(၆- ၁) Thai fish cake (1)
(၆- ၂) ယိုးဒယား သင်္ဘောသီးထောင်း (1)
(၆- ၃) Thai Basil Chicken (1)
(၆- ၄) Pineapple fried rice (1)
(၇ ၀၀) Western food (ခလေးတို့အကွိုကျ) (1)
(၇ ၀၀) Western food (ခလေးတို့အကြိုက်) (8)
(၇- ၁) Hawaiian pizza (1)
(၇- ၂) ဟမ်ဘာဂါ (1)
(၇- ၃) Chicken Wrap (1)
(၇- ၄) Popcorn Chicken (1)
(၇- ၅) Pancake (1)
(၇- ၆) KFC စတိုင် ကြက်တောင်ပံကြော် (1)
(၇- ၇) အာလူး ကတ်တလိတ်ကြော် (1)
(၇- ၈) Chicken Pie (1)
(၇- ၉) Egg and Cheese Tortilla (1)
(၈ ၀၀) ကိုးရီးယားစာ- ဂျပန်စာ (5)
(၈- ၁) ကင်မ်ချိ (1)
(၈- ၂) Kimchi Soup (1)
(၈- ၃) Japanese Golden Curry (1)
(၈- ၄) ကိုရီးယားစတိုင် ထမင်းကြော် (1)
(၈- ၅) Takoyaki (1)
(၉ ၀၀) အီန္ဒိယအစား အသောက်များ (1)
(၉- ၁) အာလူးပူရီ (1)
၁၀ ပုံရိပ်များ ... (3)
Food Show (2)
Photo Show ... (3)
Tag ... Tag .... Tag ... (11)
ကိုယ်လက်လှုတ်ရှား ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ... (1)
ခရီးသွား မှတ်တမ်း ... (8)
ငယ်ငယ်တုံးက ... (1)
စင်္ကာပူမှ သိကောင်းစရာများ ... (27)
တတ်သည့်ပညာ မနေသာ .... (1)
ဗဟုသုတ လေ့လာစရာ (2)
ပြုံးရယ်စရာ ... နဲ့ အလွဲများ ... (43)
မြန်မာ အစားအသောက် ဓာတ်ပုံများ စုစည်းမှု (4)
ဘ၀ အတွေ့အကြုံ ... (3)
ရှုမငြီးတဲ့ ချစ်သမီး လေး ... (29)
သတင်းအစုံအလင်မှာ ... (13)
ဟိုရောက်ဒီရောက် ... (75)
အက်ဆေး ... (1)
အလွမ်းအပိုင်းအစများ ... (9)
အလုပ်အတွေ့ အကြုံ (1)
နောက်ကြောင်းပြန် ... (6)
အော်စီနဲ့ ပတ်သတ်သမျှ ... (22)
နိူင်ငံရေး .... (3)
Myanmar food blog ...
Soon to be moving new home
Tun Tun Photo Diary (မြန်မာဘလော့)